Csbio: Waxaa loogu deeqay in kabadan 2 Milyan Yuan oo ah daawada Heparin si ay uga caawiso ka hortaga cudurada faafa iyo xakamaynta |
Shirkadda 'Shanghai Securities News' ee Shiinaha ee loo yaqaan 'Securities News' bishii Febraayo 27, Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. waxay ugu deeqday in ka badan 2 milyan yuan Ururka Laanqayrta Cas ee Gobolka Hubei. Daawooyinkaani waa dhamaan daawooyinka heparin sida deg deg ah loogu baahan yahay daaweynta bukaanada qaba cudurka sambabka ee wadno xanuunka. Daawooyinka kor ku xusan ayaa loo qaybin doonaa 42 isbitaal oo ku yaal Hubei oo ay ku jiraan Isbitaalka Wuhan Jinyintan. Shirkadda dawooyinka ee loo yaqaan 'Changshan Pharmaceutical' ayaa sheegtay in dib u soo celinta bulshada iyo jaceylka kalgacalku ay yihiin waajibaadka bulshada ee lama huraanka ah ee shirkadaha liiska ku jira. Marka laga hadlayo daacuunka, dawooyinka loo yaqaan 'Changshan Pharmaceutical' waxay runtii ku dadaali doonaan faa iidooyinkooda waxayna iskudayaan inta karaankooda ah inay ka caawiyaan ka hortagga iyo xakameynta cudurka faafa.
Tan ka hor, shirkadda dawooyinka ee loo yaqaan 'Changshan Pharmaceutical' waxay la xiriirtay dowladda hoose bishii Janaayo 29 waxayna ugu deeqday 2 milyan yuan lacag caddaan ah si looga hortago iyo xakameynta cudurka. Tan iyo markii uu ka dillaacay cudurka 'New Coronary Pneumonia', Changshan Pharmaceutical wuxuu xoojiyay mas'uuliyadiisa wuxuuna ku adkeystay inuu qofka koowaad noloshiisa iyo caafimaadkiisa gelinayo. Waxaan si adag uga shaqeynaa sidii loo hubin lahaa helitaanka caadiga ah ee cirbadaha dhiigga ee heparin-yar oo yar-yar ee Hubei iyo meelaha kaleba. Haddii ay dhacdo in saadka fasaxa iyo awoodda xamuulka aan dib loo soo celin, dhibaatada gaadiidku waa la xalliyay iyadoon loo eegeyn qiimaha, iyo dufcado fara badan oo ah cirbad yar oo culeyskoodu culus yahay heparin ayaa loo diray Wuhan iyo Hubei hareeraha.
Iyada oo ah shirkadda kaliya ee hogaamisa gudaha ee heparin dufan leh oo leh heparin cufan oo hooseysa Alaabada miisaanka heparin ee durdurinta iyo silsiladda warshadaha heparin dhameystiran, iibinta cirbadaha miisaanka heparin-hoose ee hoose ee ay soo saarto shirkadda loo yaqaan 'Changshan Pharmaceutical' ayaa lagu xisaabiyey 40% suuqa qaran. Cuntada aasaasiga ah ee miisaankeedu hooseeyo ee heparin-ka heparin-ka ee kaalshiyamka ah waxay abuurtay heerka YBH03832006 ee wax soosaarka, kaasoo aad uga sarreeya heerarka qaran iyo warshadaha, oo kaalinta koowaad ka galay iibka gudaha sagaal sano oo isku xigta.
Waxaa la fahamsan yahay in falalka Changshan ee daawooyinka ay si firfircoon u gutaan waajibaadkooda bulsheed iyo gacan ka geysashada ka hortagga iyo xakameynta cudurka faafa sidoo kale waxay ka heleen ammaan iyo taageero bulshada. Shirkadda ay wadaagaan Mareykanka ee ConjuChem ayaa ugu deeqay shirkadda 8,000 maaskaro si ay u taageeraan wax soo saarka shirkadda, saaxiibbada kale ayaa iyaguna muujiyay sida ay uga go’an tahay in ay ku tabarucdo maaskaro. (Liu li)